Lawa amanoveli amasha we-Android N | Izindaba zamagajethi
Lawa amanoveli amasha we-Android N
AmaVillamandos | | Android, General
Kuleli sonto i-Google imemezele ngokusemthethweni inguqulo entsha ye-Android, lapho kungenzeka khona ukulanda inguqulo yangaphambilini, okwamanje esingayihlola kumadivayisi we-Nexus. I-Android N igama lale nguqulo entsha, ezoshintsha igama layo libe uswidi, lapho yethulwa ngokusemthethweni emasontweni ambalwa bese yethulwa ngokusemthethweni emakethe.
Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela Sivivinye le Android N ukukulethela izindaba eziphambili esizothola kule nguqulo entsha Uhlelo lokusebenza lweGoogle. Uma ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izici eziyinhloko zale nguqulo entsha ye-Android, zenze ukhululeke ukuthi uzozazi ngokuningiliziwe ngezansi.
1 Amawindi amaningi
2 Izaziso zinomklamo omusha
3 Ukusebenza kahle kwebhetri kuyathuthuka futhi kulokhu kungokoqobo
4 I-interface izoba ngokwezifiso
5 Imodi yasebusuku noma imodi yasebusuku
El imodi yamawindi amaningi Ingesinye sezici ezithakazelisa kakhulu ze-Android N futhi ukuthi izosivumela ukuthi sihlukanise isikrini sethu kabili, ngokwesibonelo ukubona izinhlelo ezimbili ngasikhathi sinye. Lokhu kuzodinga umsebenzi omningi ohlangothini lwonjiniyela futhi kufanele bavumele uhlelo lwabo lokusebenza lusebenze ngaphandle kwenkinga ngemodi yamawindi amaningi eyenziwe yasebenza.
Ngenxa yale modi hhayi kuphela singahlukanisa isikrini kabili ukuze sisebenze nezinhlelo zokusebenza ezimbili ngasikhathi sinye, kepha futhi singakhetha usayizi lapho uhlelo ngalunye lisebenza esikrinini.
Ngaphezu kwalokho, futhi ihlobene nale modi entsha ye-Android N, futhi singenza uhlelo lokusebenza ngemodi efasiteleni ukuze sintante kudivayisi yethu. Lokhu kufana nalokho okwenzeka ku-YouTube lapho sinciphisa ividiyo bese sesha enye.
Izaziso zinomklamo omusha
Isikhungo sezaziso se-Android asikaze sishintshe selokhu iGoogle yasidala, kepha ngokufika kwe-Android N kubonakala sengathi ekugcineni ithathe isinqumo sokuyiguqula futhi isinikeze ukuphakama kwesihlobo. Idizayini yayo iguqulwe kancane futhi Ngaphezu kokubukeka kwayo okusha, kusivumela ukufinyelela izilungiselelo ezisheshayo zedivayisi kalula.
Kusukela manje kuqhubeke, njalo lapho sibonisa isikhungo sezaziso, kuzokhonjiswa umugqa wezithonjana, ngezinqamuleli ezinhlanu, esingazenza ngendlela oyithandayo. Ukufinyelela zonke izithonjana kufanele siqhubeke nokukhombisa isikhungo sezaziso.
Into enhle ngalesi siphakamiso esisha seGoogle sesikhungo sezaziso ukuthi inika amandla onjiniyela abaningi ukuhlanganisa impendulo esheshayo kuzinhlelo zokusebenza. Kungekude kakhulu, kungahle kube nezinqwaba zezicelo ezisivumela ukuthi siphendule ngokushesha futhi kalula ngokusebenzisa ibha yesaziso ngaphandle kokuvula uhlelo lokusebenza.
Ukusebenza kahle kwebhetri kuyathuthuka futhi kulokhu kungokoqobo
IMarshmllow ilethe nokuthuthuka okuningi maqondana nokuzimela kanye nempilo yebhethri, yize mhlawumbe yahluleka kakhulu kunalokho ebesikulindele. Nge-Android N lokhu kuthuthukiswa kokuzibusa kuzoba ngokoqobo futhi kubukeka kubalulekile impela.
Ukuthuthuka kuzofika njengoba bekulindelwe nge Doze, okungukuthi lowo msebenzi we-Android olungiselela ukusetshenziswa kwebhethri ledivayisi lapho kungasebenzi. Ngokuqondile, kunciphisa umsebenzi wezinhlelo zokusebenza ezivulwe ngemuva ngenkathi umsebenzisi engasebenzisi isikrini. Inkinga ngalo msebenzi ukuthi isebenza kuphela lapho idivayisi, kungaba i-smartphone noma ithebhulethi, ihleli ngaphezulu.
Nge-Android N Doze izoqala ukusebenza inqobo nje uma isikrini sicishiwe ngaphandle kokukhethanoma ngabe idivayisi iyahamba. Lokhu kuzokwenza ukusetshenziswa kwebhethri kube kuhle futhi kuvumele umsebenzisi ukuthi ajabulele idivayisi yakhe yeselula isikhathi eside.
Manje sidinga nje ukubheka ukuthi lo msebenzi omusha we-Android N usebenza kahle futhi ikakhulukazi uma ukonga ibhethri kubalulekile. Siyethemba futhi ukuthi isebenza kahle, njengoba i-Google ithembisa, hhayi kumadivayisi we-Nexus kuphela, kodwa kunoma yikuphi okuvuselelwa kunguqulo entsha ye-Android.
I-interface izoba ngokwezifiso
Kuze kube manje, kuzinguqulo ezahlukahlukene ze-Android ebezilokhu zize kumadivayisi ethu, singashintsha usayizi wefonti. Lokhu kusivumele ukuthi sifunde imiyalezo kangcono. Kodwa-ke kusuka manje ku-Android N singaguqula usayizi wesixhumi esibonakalayo.
Lokhu kusho ukuthi ngokusebenzisa ibha yokuhambisa, noma ngubani angakhuphula noma anciphise ubukhulu besikrini. Akungabazeki ukuthi kuzoba inketho ethakazelisa kakhulu kubo bonke abasebenzisi abanezinkinga zombono.
Imodi yasebusuku noma imodi yasebusuku
I-Android 6.0 bekufanele ifake lokho okuthiwa imodi yasebusuku, kepha iGoogle ikhethe ukuhlehlisa ukwethulwa kwayo, manje osekulungisiwe. Le modi izovumela abasebenzisi ukuthi bashintshe imibala yesixhumi esibonakalayo ngokuthinta okukodwa esikrinini.
Isibonelo, ukuthinta kanye kuzosisiza ukubheka umakhalekhukhwini wethu ngobusuku obumnyama ngaphandle kokukhanya kwesikrini noma imibala ebandayo yesikrini egcina ikhathaze amehlo ethu.
Ngokuzithoba Angicaciswanga kahle ngalesi sici esisha esizofakwa yi-Android N, kodwa impela bonke labo abasebenzisa i-smartphone noma ithebhulethi yabo ebusuku bazoyithola ngenkulu injabulo.
Yize kulolu hlu sibuyekeze kuphela izici ezinhlanu ezintsha esingazibona ku-Android, kuzoba nokuningi okuningi abasebenzisi abangakujabulela lapho ukwethulwa ngokusemthethweni, okungakabikho usuku okwaziwa ngalo.
Futhi ukucabanga ukuthi, njengoba kwenzekile kwezinye izikhathi eziningi ngokufika okusemthethweni emakethe ye-Android, kuvela izici ezintsha endaweni yesehlakalo, emsebenzini noma kokunye ongakhetha kukho, kodwa ukuzithola kuzodingeka silinde amasonto ambalwa.
Ucabangani ngezici ezintsha esingazijabulela ku-Android N?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » Lawa amanoveli amasha we-Android N
UFrancisco Hernandes carazo kusho
Ngidinga leso sicelo esisha se-google
Phendula uFrancisco Hernandes carazo
Imodi "yedeskithophu" ye-HTC Vive ikuvumela ukuthi udlale noma yimuphi umdlalo
Izimila vs Zombies Heroes, umdlalo omusha ukuqhubeka nokujabulela